Ala arovana any Ambodiarana
Mihasimba ny ala nohon'ny tombotsoan'olom-bitsy
Simba tanteraka ny ala arovana iray ao amin'ny kaominina ambanivohita Ambodiarana distrikan'ny Mahanoro faritra Atsinanana. Manoloana izany fahasimban'ny ala izany dia maneho ny alahelony ireo vondron'olona ifotony mipetraka manodidina sy ireo Tangalamena eny an-toerana.
Ny gaboraraka no fototr'izany rehetra izany hoy izy ireo satria dia maro ny fepetra ny amin'ny ala arovana no mivaha ka misy ireo olona izay mahazo alalana hamboly ao anatin'ny faritra arovana.
Etsy akilany manao ny ataony ireo manao fitrandrahana ala tsy ara-drariny ka manondrana izany any ivelany.
Hita miharihary ihany koa ny fanararaotam-pahefana izay miseho amin'ny endrika maro isan-karazany ka sahirana ireo Tangalamanena sy ny sefon'ny ala ny amin'ny fampiarana ny lalàna. Tranga iray vao tsy ela akory izay, nisy ireo olona tratra namboly lavania an-tsokosoko tao amin'ny faritra ny ala, dia rehefa nosamborin'ny fokonolona sy ny sefo ny ala dia noentina teny an-tanana. Rehefa natolotra ireo manam-pahefana dia afaka madiodio ireo olona ireo, araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra moa dia tsy afaka manao na inona na inona izy ireo nohon'ny baiko nilatska avy any ambony ny hamotsorana ireo olona ireo tsy misy hatak'andro.
Ny hetahetam-pon'ireo mponina mipetraka manodidina ny ala dia tsy sanatria ny handrava fa hiaro ny ala amin'ny maha ala arovana azy. Na eo aza anefa izany rehetra izany dia vonona ny hikolokolo sy hikajy ny ala ireo Ray aman-dreny any an-toerana, ka manaitra ireo mpitondra fanjakana isan'ny ambaratongany hijery hifotony ny zava-misy marina.
(211) S.Lantomalala : 25-05-2021 - 10:15